Yakakurudzira mabhuku kubva kune vazhinji vanyori
Mabhuku akanakisa evanyori vazhinji.
Hwang Sok Yong's top 3 mabhuku
Literature inopupura kune juiciest intrahistories mune zvese zviitiko zvenhoroondo zvakaratidzwa neiyo geopolitical vicissitudes yezuva racho. Korea yanhasi inopona nekupatsanurwa nepakati nebasa uye nenyasha dzehondo inotonhora kubva iyo Germany yakakwanisa kutiza muna 89 asi inochengetedza jira rayo...
3 mabhuku akanakisa naSantiago Diaz
Chizvarwa changu chema70s chatove chakazara neSantiago Díaz. Nekuti isu tinosanganisira vamwe vakura vanotaura nyaya saJuan Gómez Jurado, Mikel Santiago, César Pérez Gellida naPaul Pen. Ivo vese vanyori veiyo yakachena fungidziro. Inonakidza semarori makuru. Uye nenzira yaunofarira ...
Mabhuku akanakisa naLaetitia Colombani
Unoziva here iwe paunosarudza "iyi ichave ndiyo rwiyo rwandinofarira"? Zvakanaka, chimwe chinhu chakadai chinoitika kana iwe wapedza bhuku naLaetitia Colombani. Zvino nguva inopfuura uye mabhuku matsva anokushamisa iwe, sezvo nziyo nyowani dzichive nziyo dzehupenyu. Asi mubvunzo ndewekuti kuverenga kana kuongorora ...
Iwo matatu mabhuku akanakisa naEva Baltasar
Kuendeswa kwenhetembo kune prose kunosiya Eva Baltasar mutsara senge goho rechirimo. Nzira yakazadzwa nekunhuhwirira kunorira kwebindu nevhu. Mudetembi ariko saiye, zvimiro zvinenge zvine chekuita negoho rinodzurawo midzi. Midzi inogona kuva ...
Peter Carey's Top 3 Books
Musika usingafungidzike wekushambadzira dzimwe nguva unokanganwa vanyori vakaita seAustralia Peter Carey. Uye zvinonyadzisa nekuti mumabhuku aCarey tinowana munyori mumwechete anosiyana pakati penganonyorwa dzenhoroondo, uchronies, adventures uye zvakavanzika zvinouya kwatiri zvakavanzwa nekushongedzwa kwakaoma. Nekuti Carey anoita iyo ...
Mabhuku matatu akanakisa akanyorwa naEsther García Llovet
Satire inogona kuva yakanyanya acidic fomu yekuseka. Chiono che lysergic chinomutsa chiseko chinotenderera pamusoro penjodzi yetsika dzenhema, dzemapeta evanhu. Kana chiratidzo chine hutsinye chinokanganisa magariro, zvitarisiko zvinobhururuka nemumhepo, uye mafomula avo kuti azvirambe mu ...
Mabhuku matatu akanakisa naDaniel Saldaña
Kushinga, kuongorora uye kushama kwemweya nguva dzose inogadzira zvinyorwa zveavant-garde. Chimwe chinhu icho Daniel Saldaña anoparidza nekusununguka kwemumwe munhu anonyatsogutsikana nebasa rake munyika ino. Uye iye chete munyori ane chokwadi anogona kupedzisira asvika nzira nyowani dzekugadzira nemutauro ...
Mabhuku akanakisa aAlice Feeney
Akabhabhatidzwa semunyori mukuru wekunakidzwa kwepfungwa, munyori wechiRungu Alice Feeney akawana mvumo yevaverengi vasingafungi kubva pasirese. Kusvika pakumufananidza naShari Lapena. Ipapo inogona kudzikisira kune yakakura kana kushoma pamwero sezvakaitika munyaya yaPaula Hawkins. Asi…
Peji1 Peji2 ... Peji161 Zvadaro →